50,000 ton compound fatịlaịza mmepụta akara - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Ngwakọta fatịlaịza, nke a makwaara dị ka fatịlaịza kemịkalụ, bụ fatịlaịza nwere nri abụọ ma ọ bụ atọ nke ihe ọkụkụ, dị ka nitrogen, site na potassium, nke arụpụtara site na mmeghachi omume kemịkal ma ọ bụ usoro agwakọta; fatịlaịza fatịlaịza nwere ike ịbụ ntụ ma ọ bụ granular. Fatịlaịza mejupụtara nwere ihe ndị na-arụ ọrụ dị elu, ọ dị mfe ịgbanye na mmiri, na-ere ngwa ngwa, ọ dịkwa mfe itinye ya na mgbọrọgwụ. Yabụ, akpọrọ ya "fatịlaịza na-eme ngwa ngwa". Ọrụ ya bụ iji gboo mkpa na nguzozi nke ihe oriri dị iche iche na ọnọdụ mmepụta dị iche iche.
Ngwurugwu a na-emepụta kwa afọ nke fatịlaịza 50,000 bụ ngwakọta nke akụrụngwa dị elu. Ulo mmeputa abughi oru. Onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere ike ji mee ihe maka granulation dị iche iche mejupụtara ngwaọrụ. N'ikpeazụ, a ga-akwadebe fatịlaịza dị iche iche dị iche iche na usoro dị iche iche dị ka mkpa n'ezie si dị, mejupụta ihe oriri na-edozi ahụ nke ọma, ma dozie esemokwu dị n'etiti mkpa ihe ọkụkụ na ala.
Mejupụtara Fatịlaịza Production Line na-bụ-eji na-emepụta onyinye fatịlaịza nke dị iche iche formulas dị ka potassium s nitrogen, site potassium perphosphate, potassium chloride, granular sulfate, sulfuric acid, ammonium nitrate na ndị ọzọ dị iche iche formulas.
Dị ka ọkachamara na-emepụta fatịlaịza na-emepụta akara akụrụngwa, anyị na-enye ndị ahịa ngwá ọrụ mmepụta na ihe ngwọta kachasị mma maka ikike ikike mmepụta dị iche iche dị ka tọn 10,000 kwa afọ ruo tọn 200,000 kwa afọ. Ngwakọta akụrụngwa zuru ezu bụ nke nwere kọmpat, ezi uche na sayensị, na arụ ọrụ kwụsiri ike, mmetụta nchekwa ike dị mma, ụgwọ mmezi dị ala na ọrụ dị mfe. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka fatịlaịza fatịlaịza (fatịlaịza fatịlaịza).
Mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara nwere ike na-emepụta elu, ọkara na ala ịta compound fatịlaịza si dị iche iche kụrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, onyinye fatịlaịza nwere ma ọ dịkarịa ala abụọ ma ọ bụ atọ nri (nitrogen, site, potassium). Ọ nwere njirimara nke ọdịnaya dị elu na obere mmetụta. Fatịlaịza fatịlaịza na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọta spam. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị melite Fertilization arụmọrụ, kamakwa kwalite anụ na akwa mkpụrụ nke kụrụ.
Ngwa nke onyinye fatịlaịza mmepụta akara:
1. Production usoro nke sọlfọ-baged urea.
2. Usoro mmepụta dị iche iche nke fatịlaịza na nri na ahịhịa.
3. Acid fatịlaịza usoro.
4. Powdered ulo oru inorganic fatịlaịza usoro.
5. Nnukwu urea usoro imepụta urea.
6. Production usoro nke matriks fatịlaịza maka seedlings.
Ngwaọrụ dị maka mmepụta fatịlaịza organic:
Akụrụngwa nke usoro mmepụta fatịlaịza bụ urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia mmiri mmiri, ammonium phosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, gụnyere ụfọdụ ụrọ na ndị ọzọ na-agba mmiri.
Mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara rotary drum granulation na-bụ-eji na-emepụta elu-ịta onyinye fatịlaịza. Enwere ike iji granulation mee ihe iji mepụta teknụzụ fatịlaịza fatịlaịza dị elu ma dị ala, jikọtara ya na teknụzụ na-egbochi fatịlaịza na teknụzụ, teknụzụ nitrogen na-emepụta fatịlaịza, wdg.
Ngwakọta fatịlaịza nke ụlọ ọrụ anyị nwere njirimara ndị a:
A na-ejikarị ihe eji arụ ọrụ eme ihe: enwere ike ịmepụta fatịlaịza dịka usoro dị iche iche na etu o si agbakọ fatịlaịza, ha dịkwa mma maka ịmịpụta fatịlaịza na ngwakọta.
Onu ogugu di ala na nkpuru biobacterium di elu: usoro ohuru nwere ike nweta onu ogugu nke kariri 90% rue 95%, na teknụzụ ikuku ikuku na-adighi ala nwere ike ime ka nje ndi mmadu choro ihe kariri 90%. Ngwa a gwụchara mara mma n’ile anya na ọbụlagodi nha, 90% n’ime ya bụ irighiri ihe nke nwere ihe ruru 2 rue 4mm.
Usoro ọrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe: enwere ike ịhazi usoro nke fatịlaịza fatịlaịza na ngwongwo dịka ezigbo akụrụngwa, usoro na saịtị, ma ọ bụ enwere ike ịhazi usoro ahaziri dịka mkpa ndị ahịa chọrọ.
Onu ogugu nke ihe oriri nke ihe ndi mejuputara bu ihe siri ike: site na nha nke ihe di iche iche, ntule ziri ezi nke ihe di iche iche, mmiri na ihe ndi ozo, ihe dika idozi nguzosi ike na nziputa nke ihe oriri obula.
Usoro usoro nke mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara nwere ike na-emekarị na-ekewa n'ime: akụrụngwa Efrata, inggwakọta, ndinuak nke nodules, granulation, mbụ screening, urughuru ihicha, urughuru jụrụ, abụọ echetakwa, okokụre urughuru mkpuchi, na quantitative nkwakọ nke okokụre ngwaahịa.
A na-egweri lumps dị na ihe ahụ mgbe agwakọtara nke ọma, nke dị mma maka nhazi granulation na-esote, ọkachasị iji igwe na-eme ihe.
The ihe mgbe agwakọta evenly na-echi ọnụ n'ala na-gaa granulation igwe site a eriri ebu, nke bụ isi akụkụ nke ọtụtụ ihe mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara. Nhọrọ nke granulator dị ezigbo mkpa. Anyị factory arụpụta disk granulator, drum granulator, ala extruder ma ọ bụ onyinye fatịlaịza granulator.
A na-edozi mkpụrụ ahụ, a na-eweghachi irighiri irighiri ihe ndị a na-agwakọta na njikọ na-akpali akpali maka ịmeghachi. N'ozuzu, a na-eji igwe ihe eji eme ihe.
6. Nkwakọ ngwaahịa: